बैशाख १६ पछि मेलम्चीको पानी धारामा « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 13 April, 2022 6:09 am
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मंगलबार मेलम्ची खानेपानीको पुनः उद्घाटन गरेका छन् । पानी १४ वैशाखमा सुन्दरीजल आइपुगेपछि त्यहाँ रहेको प्रशोधन केन्द्र हुँदै वितरण प्रणालीमा पुग्नेछ । वितरण प्रणालीमार्फत उपभोक्ताका धारामा पानी पठाइनेछ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम कुँवरले मंगलबार सुरुङमा छाडिएको पानी प्रतिसेकेन्ड २ सय ६५ लिटर सुन्दरीजल आइपुग्न १५ दिन लाग्ने बताएका छन् । सुन्दरीजलमा पानी आइपुगेको दुई दिनपछि वितरणका लागि तयार हुनेछ ।
यसरी तयार भएको पानी वितरण काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) गर्नेछ । केयूकेएलले तालिका बनाएर उपभोक्ताको धारामा पानी पठाउनेछ ।
४० दिनपछि बन्द किन ?
गत १ असारको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको थियो । सो बाढीपछि काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले मेलम्चीको पानी पिउन पाएका छैनन् ।
यो चार महिनामा आयोजना स्थलमा गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भने जारी रहने आयोजनाले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा पनि सरकारले २०७९ सालको वैशाखसम्म बाढीग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनस्र्थापनाको काम सकेर काठमाडौंमा पुनः पानी ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा काठमाडौंको सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने वाचा गरेपछि यसको परिकल्पना अघि बढेको थियो ।
मेलम्ची आयोजनाको सुरु २०५८/५९ सालमा नै भएको थियो । आयोजना सुरु गर्दा २०६४/६५ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन ।